कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित को ? Nepalpatra कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित को ?
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित को ?
नोबेल कोरोना भाइरसबाट सवैभन्दा बढी रिक्स डाक्टर, नर्स, फार्मेसि र एम्बुलेन्स चालक बढी हुने भएका छन् । एकजना डाक्टर नर्स र एम्बुलेन्सलाई सक्रमित व्यक्तिले छोएमा अन्य बिरामीलाई डाक्टर नर्स र एम्बुलेन्सले दिनमा १०० औं जनालाई रोग सार्न सक्छन् भन्ने खतरा बढेको छ ।
सरकारले हरेकको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने समय देखिएको छ । यस्ता रोगको घेरामा प्रवेश गरेपछि उम्कन नसकिने हुनाले यस समुहका व्यक्तिहरूलाई थर्मोमिटर र आवश्यक कपडा उपलब्ध गराएमा ठिक हुने देखिन्छ ।
रोग को सँग छ भन्ने एकिन नहुने भएकाले यस्ता रोग संघ बच्नु बचाउनु नै उपयुक्त ठहर छ । यस्तो सेवा प्रदायक स्थानमा सम्पर्क राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ तर कतिपय डराउने गरेको देखिन्छ । यो समय भनेको बाचौं र बचाउ भन्ने हो तर लापरबाही बढी हुदा यसको असर बढी हुने खतरा बढेको देखिन थालेको छ ।
सुरक्षित रहन आफु पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउ भन्ने नारासाथ सवै लाग्न आवश्यक हुदैछ । यो रोग कमजोर शरीर भएका र बढी उमेर समुहका व्यक्ति बढी सक्रमित हुने हुनाले यस्ता विरामी बढी सतर्कता अपनाउन सके यो रोगबाट विजय पाउन सक्ने देखिन्छ ।
मेरो परामर्श यस्तो छ । यो रोगको औषधि नभएको अवस्थामा यसबाट बच्नु एकमात्र विकल्प हुने भएकाले पाको उमेर र श्वास-प्रश्वास सम्बन्धित रोग छ या लामो समयदेखि रूघा लागेको छ । यदि यस्तो समस्या भएका विरामीलाई सक्रमण हुने खतरा भएकाले भित्रै बस्न र पौष्टिक खाना खान आग्रह गर्छु । यस्ता बिरामीलाई यदि ज्वरो आएको छ सास लिन गार्हो भएको छ भने डाक्टरको निगरानीमा उपचार गराउनु पर्दछ ।